A place to say something: ချစ်ခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲ
အမှန်တယ်တော့ အချစ်ဆိုတာကို စတင်သိကျွမ်းချိန်မှာသာ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာသော စိတ်ခံစားမှုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ တမ်းတရတာတွေ… ရင်မောရတာတွေ.. စိတ်ဓါတ်ကျချင်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျိုးတွေကိုသာ ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တာပါ……..
ကျွန်တော်က အချစ်ဆိုတာကို “ အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံသော စိတ်ခံစားမှုအားလုံးတို့၏ အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ” လို့ အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ဖူးတယ်… ကျွန်တော်ဘာကြောင့်များ သူ့ကိုချစ်မိသွားခဲ့ပါလဲ… ဘာအကြောင်းပြချက်မျှ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး … ဒါပေမယ့် ချစ်ခဲ့တာတော့ သေချာတယ်..
“ ကောင်မလေးရေ…. အဲဒီလိုမေးခွန်းမျိုး မမေးဖို့ ကြိုတင်ပြောထားပါရစေကွယ်… ”
ကြားဖူးတာတစ်ခုရှိတယ်… လျှို့ဝှက်စွာခံစားပြီး အချစ်ကိုခံစားတတ်တာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချစ်တဲ့… ယောကျာ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ မိမိရဲ့အချစ်ကို ထုပ်ဖော်ပြသနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တဲ့…
ခက်တော့နေပြီဗျာ… ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ.. အဲဒီအချစ်ဆိုတာကို ရင်ထဲမှာပဲ ခံစားတတ်တော့…. ဘယ်လိုပြောပြရမှာလဲ… တစ်ခါတစ်ရံမှာ စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် စကားလုံးတွေက ရှာပါးလွန်းတယ်ဗျ….
တကယ်တော့ ကျုပ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တည်နေတဲ့ သူ့အပေါ်ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်မေတ္တာဆိုတာ… ဒီလိုသိမ်နုပ်သေးငယ်လှတဲ့ စကားလုံးလေးနှစ်လုံးတည်းနဲ့ အဓိပ္ပယ်ပြည့်စုံနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး….
ဒါ့ကြောင့်လဲ “ ချစ်တယ် ” ဆိုတဲ့ ဒီစကားလုံးနှစ်လုံးကို သူသိအောင် အလွယ်တကူမပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ…..
Posted by ko ye at 10:34 PM